MAXEEY KU HESHIIYEEN MELEZ IYO FAROOLE ???
Loading...	Home Wararka MAXEEY KU HESHIIYEEN MELEZ IYO FAROOLE ???
MAXEEY KU HESHIIYEEN MELEZ IYO FAROOLE ???	Friday, 06 July 2012 10:04	C/raxmaan Maxed Maxud Faroole ayaa waxa uu ka hadlay kulamo aay wada qateen raisal wasaaraha dowlada itoobiya.
Madaxweynaha maamul goboleedka Puntland C/raxmaan Max’ed Max’ud Faroole ayaa waxaa uu saxafada u sharaxay kulamo ay la qaateen dowlada Itoobiya Kaasi oo ku saabsanaa wada shaqeyn dhax marta laba dhinac ee Itoobiya iyo Puntland oo salka kuheesa in dadka dambiyada ka gala labada dhinac in ay is dhaafsadaan.
Faroole ayaa sidookale sheegay in ay isku afgarteen dowlada Itoobiya sidii uu iskashi buuxa uu u dhaxmari lahaa iyaga Iyo Itoobiya isagoona intaas ku daray in cid kasta oo dambi ka soo gasha Itoobiya oo ku sugan Puntland aay gacanta u galin doonaan Dowlada itoobiya halka dadaka dambiyada ka gala maamulka putland ayagana aay dib noogu soo celinayaan.
Hishiiskan ay wada galeen Itoobiya Iyo Puntland ayaa waxa uu imaanaya iyadoo wararku ay sheegayaan in ay marar badan ay Puntland ay Itoobiya u gacan galisay dad badan oo soomaali ah oo ay ku jireyn culuma Udiin kuwaasi oo ay ku sheektay in ay ka tirsan yihiin shabaab iyo Al qaacida